Tababaraha Cusub Ee Xulka Qaranka Spain Fernando Hierro Oo Markii Ugu Horeesay La Hadlay Saxaafada Tan Iyo Markii Loo Magacaabay Inuu Yahay Badalka Julen Lopetegui – GOOL24.NET
Tababaraha Cusub Ee Xulka Qaranka Spain Fernando Hierro Oo Markii Ugu Horeesay La Hadlay Saxaafada Tan Iyo Markii Loo Magacaabay Inuu Yahay Badalka Julen Lopetegui
Tababaraha cusub ee xulka qaranka Spain Fernando Hierro oo ah macalinka cusub ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id, tan iyo markii lagu dhawaaqay inuu yahay badalka Julen Lopetegui oo shalay xidhiidhka kubada cagta dalka Spain ay shaqada tababarka ka ceydhiyeen.
Xidhiidhka kubadda cagta Spain ayaa shalay u magacaabay Fernando Hierro macallinka cusub ee beddelaya Julen Lopetegui oo shaqada laga caydhiyey, xili Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales si weyn loogu amaanay qaabka uu ula tacaalay xaalada xulka qarankiisa iyo qaabkii uu uga jawaab celiyay kadib markii uu Julen Lopetegui heshiis la gaaray kooxda Real Madrid.
Hadaba Fernando Hierro ayaa waxyaabihii uu kaga hadlay shirkiisa jaraa’id waxaa soo xigtay wargeyska “Marca” ee dlak Spain waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: “Waa arin wanaagsan ee xiiso badan, Julen Lopetegui wuxuu qabtay shaqo cajiib ah, waxaan u rajeynayaa hormar fiican”.
Laacibkii hore kooxda Real Madrid ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray: “Waan ogahay waxa aan heysano ee ciyaartoy ah, iyo sida geesinimada leh ee aan arintan ku wajihi doono, waa go’aan deg-deg ah, mana dhihi karo maya”.
Macalinka cusub xulka qaranka Spain oo ka hadlay ujeedkooda koowaad ayaa wuxuu yiri: “Waa inaan si aad ah ugu tartannaa wareega koowaad, kaas ayaana hada ah ujeedkeena koowaad, Waxaan doonayaa inaan si fiican u ciyaaro, isla markaana aan kubada heysano goolalna dhalino”.
“Ugu horeyn Waxaan ka fekereynaa Portugal, ma ka fekereyno wax walba oo kale, marka laga reebo Koobka Adduunka, waxaan haystaa hal sano oo waayo-aragnimo ah ee ah shaqada tababarka ee koox koowaad, waxaana sidoo kale leeyahay 30 sano ee xirfada kubada cagta ah”.
“Waxay nagu noqon doontaa khaalad weyn, hadii aan ka fikirno wixii dhacay, waa inaan kaga gudubnaa si wanaagsan oo geesinimo leh, waxaan haysanaa dhamaanba xaaladaha la dagaalanka, si aan u galno tartanka waxa la filayo in 4-tii sanoba ay mar dhacaan”.